भानुभक्तको जन्मदिनमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली दिएपछि...
Saturday, 15 Jul, 2017 7:53 AM
नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनमा भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले श्रद्धाञ्जली दिँदै ट्वीट गरेपछि उनको ट्वीटमाथि चर्चा चुलिएको छ।
ममताले भानु जयन्तीका अवसरमा नेपाली भाषामै ‘कवि भानुभक्तको जन्मदिवसमा श्रद्धाञ्जली’ लेखेकी थिइन् ।
यो ट्वीटसँगै कतिले उनको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले विरोध गरेका छन् । नेपालका आदिकवि भानुभक्तको जन्म सन् १८१४ र मृत्यु १८६८ मा भएको थियो । ममताले भानुको जन्मदिनमा उनलाई याद गरेकी हुन् ।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केहीले उनको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले दार्जिलिङमा जारी अशान्तिको स्मरण गराएका छन् । नेपालका बासुदेव पोखरेलले ट्वीटर वालमा लेखेका छन्–जन्मदिनमा श्रद्धाञ्जली दिनुको अर्थ के हो ?
अहिले दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको मागसहित आन्दोलन चलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यही बाहनामा प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
ट्वीट हैन्डलबाट @rajeshxarma ले लेखेका छन्–श्रद्धाञ्जली चाहिन, हामीलाई गोर्खाल्याण्ड चाहियो ।
जयन्ता मिश्रा नामकी अन्य एकको प्रश्न छ–भानुभक्तलार्य तपाई याद त गर्नुहुन्छ, तर उनकै वशंज गोरखाहरुमाथि दार्जिलिङमा कत्लेआम किन भइरहेको छ ?
केहीले भने ममताको प्रशंसा पनि गरेका छन् । कतिले त उनको भाषिक त्रुटिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
जयदेव भन्छन्–हामी तपाईलाई मन पराउँछौ ममता दिदी । तपाई बंगालकी आमा हुनुहुन्छ ।
दिपेश सिंह राणाले लेखेका छन्–नेपाली भाषामा ट्वीट गरेकोमा धन्यवाद । तर, अझै केही गल्ती छ । बीबीसी हिन्दी